Orinasa Kanadiana No Hanorina Ny Toeram-pitrandrahana Volamena Ankalamanjana Lehibe Indrindra ao afovoan’ny Amazonia Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Orinasa Kanadiana No Hanorina Ny Toeram-pitrandrahana Volamena Ankalamanjana Lehibe Indrindra ao afovoan'ny Amazonia Ao Brezila
Voadika ny 04 Avrily 2017 11:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Italiano, Français, Português
Ny filentehan'ny masoandro mandritra ny fitondrana lakana Bye Bye Xingu, hetsiky ny mpikatroka notohanan'ny tompotany sy ny mponina ao an-toerana, miaraka amin'ny fanohanan'ny ISA, tao amin'ny Volta Grande do Xingu tamin'ny taona 2016. Sary: Lilo Clareto/ISA, nahazoana alàlana.
Tantara roa natambatry ny Instituto Socioambiental , ONG Breziliana iray izay miaro ny zon'ny tontolo iainana sy ny zon'ny tompotany, ity ambany ity. Ary navoaka ho lahatsoratra iray nahazoana alalana eto amin'ny Global Voices .
Mikasa ny hanorina tsy ho ela ny toeram-pitrandrahana volamena ankalamanjana lehibe indrindra ao Brezila ny orinasa Kanadiana iray, ao afovoan'ny alan'i Amazonia eo amoron'ny renirano Xingu izany. Na izany aza, nanao ady ara-pitsarana momba ilay tany ireo mpikatroka, fikambanana ONG ary mpisolovava Breziliana.
Ny orinasam-pitrandrahana Belo Sun , izay manana foibe any Toronto, no ao ambadiky ny Tetikasa Volta Grande Gold, izay mikasa ny hitrandraka volamena milanja 600 taonina mandritra ny 12 taona. Hiteraka fako misy poizina avo roa heny amin'ny hadirin'ny tendrombohitra Sugarloaf ao Rio de Janeiro ny toeram-pitrandrahana. Tsy maintsy hafindra toerana ny vondrom-piarahamonin'ny fianakaviana miisa 300, izay mipetraka ao amin'ny tany ao Vila da Ressaca, tanànakely Galo sy Ouro Verde, rehefa hiroso ny tetikasa.
Nahazo alalana avy amin'ny fanjakana Pará tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary ny orinasa izay nanomboka nanao ny fikarohana ny faritra tamin'ny taona 2008, mba hanomboka fanorenana kanefa nampiato ny fahazoan-dalana mandritra ny 180 andro ny fitsarana tamin'ny 22 Febroary noho ny filazany fa nahazo fitoriana avy amin'ny biraon'ny ny mpiaro ny vahoaka ao Pará izy ireo.
Tao amin'ny didim-pitsarana, nilaza ny mpitsara Álvaro José da Silva Souza fa ho alefany any amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna federaly ny raharaha mba hitarihana ny fanadihadiana raha toa ka nanao fangoronan-tany [nandrombaka] ny orinasa rehefa nividy ny tanim-bahoaka federaly. Ny tany izay resahana eto, Vila da Ressaca, Galo sy Ouro Verde, no mandrafitra ny faritra atao hoe Ituna, ary notendren'ny governemanta federaly tamin'ny taompolo 1980 ho ampiasain'ny olona any ambanivohitra izay ao anatin'ny fanajariana ny tany.
Milaza ihany koa ny didim-pitsarana fa tao anatin'ny telo taona farany, nanomboka tamin'ny nivoahan'ny fahazoan-dalana savaranonando tamin'ny taona 2014 ka hatramin'ny nanomezana vao haingana ny fahazoan-dalana fanorenana, tsy nanao na inona na inona mba hamindra-toerana ireo mponina lasibatra eo amin'ny manodidina tamin'ny fomba mendrika azy ireo ny orinasa. “Fantatro fa tena tsy mitombina sy tsy azo leferina fa mbola miandry ny famindram-pon'ny vintana ny fianakaviana amin'izao fotoana izao,” hoy ny fivakin'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara. Nanome 180 andro ho an'ny orinasa ny didim-pitsarana mba hamolavolany ny drafitra hamindrana ireo fianakaviana, ary mitaky ny orinasa izy mandritra izany fotoana izany mba hanome antoka ny fianakaviana amin'ny fahafahana miditra ao amin'ilay tany .
Efa nizaka tanteraka ny fiantraikan'ny tohodrano mpamokatra herinaratra Belo Monte izay tetikasa fampandrosoana tsy misy ifandraisana taminy ny toerana nomena ny fitrandrahana, nanomboka ny dingana fanandramana tamin'ny faramparan'ny taona 2015 io tetikasa io. Nampihena ny fikorianan'ny rano hatrany amin'ny amin'ny 80% amin'ny 100 kilaometatra misandrahaka amin'ny reniranon'i Xingu ny tohodrano, ankoatra ny famonoany ny trondro, dia nanova tanteraka ny fomba fiainan'ireo tompotany maro sy ny mponina manodidina ny fandotoana ny rano hatramin'ny nanombohan'ny fanorenana tamin'ny taona 2011.
Hodidinin'ny ahiahy ny tetikasa fitrandrahana volamena Belo Sun eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, araka ny zava-doza nitranga vao haingana teo akaikin'ny Mariana ao amin'ny fanjakana Minas Gerais. Tamin'ny volana Novambra 2015, vaky ny tohodrano tao amin'ny toeram-pitrandrahan'ny Samarco — orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany iraisan'ny BHP sy ny Vale — ka niraraka an'arivony tapitrisa litatra tao amin'ny renirano Doce ny fako, ka nahafatesan'olona miisa 19 sy namela tsy manan-kialofana miisa 700 .
Ny naoty ara-teknika navoakan'ny Belo Sun tamin'ny taona 2012, izay niresaka momba ny ahiahin'ny besinimaro tao amin'ny fihainoana ny hevitry ny vahoaka, dia notarihin'ilay injeniera izay nanome antoka ny fahamafisan'ny tohodrano Mariana efa-bolana talohan'ny nahavakisany. Tamin'ny volana Novambra 2016, nomelohin'ny fitsarana federaly noho ny vonoan'olona izy niaraka tamin'ny mpitantana hafa miisa 20.
Fakàna ny hevitry ny vondrom-piarahamonina tompotany
Tsy nanontaniana ny hevitr'ireo vondrom-piarahamonina tompotany voakasiky ny Tetikasa Volta Grande Gold mivantana araka ny voalaza ao amin'ny Fifanarahana laharana faha 169 momba ny Fikambanan'Asa Iraisam-pirenena, izay efa nosoniavin'i Brezila.
Enina andro taorian'ny nivoahan'ny ny fahazoan-dalana fanorenana tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary, namoaka tamin'ny teny Anglisy ny antsipirian'ny drafitra fitrandrahana mahafaoka 120 kilometatra manerana ny Renirano Xingu ny orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany tao amin'ny tranonkalany. Raha toa ka hampihatra ilay drafitra ny orinasa dia hisy ny fiantraikan'izany amin'ny Tanin'ny Tompotany, voatonona tamin'ny fomba ofisialy ho miisa efatra (Terras indígenas) fara fahakeliny : Paquiçamba, an'ny vahoaka Juruna ; Ituna / Itata, izay faritra hiveloman'ny tompotany mitoka-monina ; Arara da Volta Grande, an'ny Arara; ary Trincheira Bacajá, an'ny vahoaka Xicrin. Milaza ny lalàna Breziliana fa tokony hatao any anivon'ny sampana federaly ny fahazoan-dalana fanorenana ao amin'io faritra io (fa tsy any amin'ny governemanta-panjakan'i Pará akory ) satria misy fiantraikany mivantana amin'ny tanin'ny tompotany izany.
Belo Sun namoaka sarintany miaraka amin'ny tetikasa nomaniny tao amin'ny tranonkalany , kanefa tsy nampiseho ny tanin'ireo tompontany eo akaikiny.Ny Instituto Socioambiental no namolavola ny sarintany .
Amin'izao fotoana izao, tsy mbola misy ny fakana ny hevitry ny vahoaka izay mety ho lasibatra rehefa miroso ny tetikasa . ” Toa tsy misy mponina tompotany ao raha jerena eo amin'ny sarintany. Ho an'ny Belo Sun, tsy misy olona eo na iray aza”, hoy Mukuka Xicrin, izay lehiben'ny vahoaka Xincrin .
Nanao hitsindalana tsy naka ny hevitry ny Fahefam-bahoaka Brezila misahana ny raharahan'ny tompotany (Orina Mpanasoa ny Tompotany ao amin'ny Firenena, na FUNAI) ao Brezila ihany koa ny fahazoan-dalana nomen'ny fanjakana Pará tamin'ny volana Febroary, izay mitaky ny fandinihina ny fiantraikan'izany eo amin'ny vahoaka tompotany, ary mihevitra fa tsy ampy ny fanadihadihana nasehon'ny Belo Sun .
Nametraka fitoriana mba hampitsaharana ny fahazoan-dalana na ny birao federaly na ny mpiaro ny fanjakam-bahoaka, miaraka amin'ny fitoriana izay notohanan'ny fitsarana. Nametraka fangatahana mivantana tany amin'ny sampan-draharahan'ny tontolo iainana ao Pará ihany koa ny biraon'ny mpampanoa lalàna federaly izay mitaky ny fanoherana ny fahazoan-dalana. Efa nametraka fitoriana roa hafa manohitra ny tetikasa teo aloha ny biraon'ny mpampanoa lalàna.